Raising Multilingual Children Tickets, Fri 03/09/2021 at 11:00 am | Eventbrite
Thank you for your interest. Ticket sales have ended for the Raising Multilingual Children Session. For more information on future events go to https://www.maribyrnong.vic.gov.au/Events
Raising Multilingual Children Nuôi dạy Trẻ em Đa ngôn ngữ ဘာသာစကားနှစ်မျိုးသုံး ကလေးများကို ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း
Professor John Hajek will talk about the importance of speaking to your child in your first language. He will also share practical tips and strategies to promote the use of first language with your child ( 0-12years). Burmese and Vietnamese interpreters will translate the information.
ng của việc nói chuyện với con quý vị bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Giáo sư cũng sẽ chia sẻ các hướng dẫn và phương pháp để khuyến khích sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ với con quý vị (0-12 tuổi). Thông dịch viên người Miến điện và người Việt sẽ dịch các thông tin này.
ပါမောက္ခ John Hajek က သင့်ကလေးကို သင်၏မိခင်ဘာသာစကားဖြင့် ပြောရန်အရေးကြီးပုံအကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားသွားပါ မည်။ သူသည် သင့်ကလေး (0-12 နှစ်)နှင့်အတူ မိခင်ဘာသာစကား အသုံးပြုပုံကို အားပေးမြှင့်တင်နိုင်မည့် လက်တွေ့အကြံပြုချက် များနှင့် နည်းဗျူဟာများကိုလည်း မျှဝေပေးသွားပါမည်။ မြန်မာစကားပြန်နှင့် ဗီယက်နမ်စကားပြန်များက အချက်အလက်များကို ဘာသာပြန်ပေးသွားပါမည်။ အသက်
Organiser of Raising Multilingual Children